Benz က Android ကား DVD,-Benz က Android HD touch screen မော်တော်ကား DVD,-Benz စမတ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်သန့်စင်သောအန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:-Benz က Android ကား DVD,-Benz က Android HD touch screen မော်တော်ကား DVD,-Benz စမတ်သန့်စင်သောအန်းဒရွိုက်ကား DVD,7Inch ကို Android 4.0-Benz ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > -Benz က Android ကားကို DVD Player ကို
-Benz က Android ကားကို DVD Player ကို ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, -Benz က Android ကား DVD, -Benz က Android HD touch screen မော်တော်ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, -Benz စမတ်သန့်စင်သောအန်းဒရွိုက်ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
android 10 touch screen ကစားသမား SMART 2011 အတွက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Benz SLK-Class R171 အသစ်အတွက် android 2din  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Mercedes-Benz SLK အတွက် Android 10 ကား DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SMART 2018 အတွက် Android 10 ကားရေဒီယိုစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
MB Smart 2016-2018 အတွက် Android ကားလမ်းညွှန်ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Mercedes-Benz W211 အတွက်ကား DVD Player (၂၀၀၂-၂၀၀၈)  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
R-Class ကို 2006-2014 များအတွက်ကား DVD ကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ML CL16 W164 အတွက်ကား GPS တပ်ဆင်ထားသည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Mercedes-Benz S-Class အတွက် gps bluetooth ပါသောကား DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Mercedes C-Class 2004-2007 အတွက် Android ကား DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Mercedes A-W169 2005-2011 android ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Mercedes-benz android ကား DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
W169 W245 Viano Vito အတွက်အော်တိုဖျော်ဖြေမှု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
E-Class W211 G-Class w463 အတွက် Autoradio Android 9.0  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Vito Viano A-W169 အတွက် Android 9.0 Car Radio  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကို C လူတန်းစားများအတွက်ဘလူးတုသ်ကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
w211 များအတွက် dash ကားတစ်စီးကစားသမားအတွက်လူကြိုက်များ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2019 ခုနှစ်က S လူတန်းစားများအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
W211 ဟာ android 9.0 ကားတစ်စီးအသံဖိုင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
dash ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာဟာ android 9.0 ကို C အတန်းထဲတွင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
android 10 touch screen ကစားသမား SMART 2011 အတွက်
ထုပ်ပိုး: GIFT BOX + CARTOON BOX
Benz SMART 2011-2015 အတွက် Android9PX5 octa core head unit ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 10 စနစ်၊ 4GB RAM၊ high-end Rockchip processor, SIX Core 32GB / 64G ROM, Cotex A72 (1.8Ghz) + A53 (1.4Ghz) ၂) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP TEF6686၊ Built-in...
Benz SLK-Class R171 အသစ်အတွက် android 2din
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 271 / Piece/Pieces
Benz SLK-Class R171 အတွက် Android9PX5 octa core head unit (SLK200 / 280/300/350/55) 2004-2012 -Benz R171 / SLK200 / 280 ထောက်ခံမှုဘလူးတုသ်ခေါ်ဆိုခ / အသံပြဇာတ်, Sync ကိုဖုန်းစာအုပ်, အမြန်ရှာဖွေရေးအဆက်အသွယ်များ, ပြင်ပ microph...
Mercedes-Benz SLK အတွက် Android 10 ကား DVD player
Mercedes-Benz SLK 2004-2012 အတွက် Android 10 car dvd player SLK-Class R171 (SLK200 / 280/300/350/55) 2004-2012 Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android 10.0 စနစ် CPU ကို:...
SMART 2018 အတွက် Android 10 ကားရေဒီယိုစတီရီယို
Benz Smart 2016 2017 2018 အတွက် Android ကားရေဒီယိုစတီရီယို 1. Android 10.0 benz smart 2016 2017 2018 မော်ဒယ်အတွက်ကားသွားလာမှု - ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲမှုနောက်ခံ - ရရှိနိုင်သည့် 7dynamic backgrouds ။...
A-Class W169 ၂၀၀၄-၂၀၁၂ ကားမာလ်တီမီဒီယာလမ်းညွှန်စနစ် ဒီယူနစ် A-Class W169 ကို Android 10 စနစ်ဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်သည့် android ကားလမ်းညွှန် သည်အသုံးပြုသူများကိုချောချောမွေ့မွေ့တုံ့ပြန်မှုကိုခံစားနိုင်သည်။...
MB Smart 2016-2018 အတွက် Android ကားလမ်းညွှန်ရေဒီယို
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 250 / Set/Sets
MB Smart 2016-2018 အတွက် Android ကားလမ်းညွှန်ရေဒီယို Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM -...
Mercedes-Benz W211 အတွက်ကား DVD Player (၂၀၀၂-၂၀၀၈)
Mercedes-Benz W211 အတွက်ကား DVD Player (၂၀၀၂-၂၀၀၈) E-Class W211 (၂၀၀၂-၂၀၀၈) CLS W219 (04-08) G-Class w463
R-Class ကို 2006-2014 များအတွက်ကား DVD ကစားသမား
R-Class ကို 2006-2014 များအတွက်ကား DVD ကစားသမား R-Class W251 (၂၀၀၆-၂၀၁၄) R-Class W280 (၂၀၀၆-၂၀၁၁) R-Class W300 (၂၀၀၆-၂၀၁၁) R-Class W320 (၂၀၀၆-၂၀၁၁) R-Class W350 (၂၀၀၆-၂၀၁၁) R-Class W500 (၂၀၀၆-၂၀၁၁)...
ML CL16 W164 အတွက်ကား GPS တပ်ဆင်ထားသည်
Mercedes-Benz S-Class အတွက် gps bluetooth ပါသောကား DVD
Mercedes C-Class 2004-2007 အတွက် Android ကား DVD
Mercedes A-W169 2005-2011 android ရေဒီယို
Mercedes-benz android ကား DVD player
W169 W245 Viano Vito အတွက်အော်တိုဖျော်ဖြေမှု
W169 W245 Viano Vito အတွက်အော်တိုဖျော်ဖြေမှု စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လိုက်ဖက်သော W169 အတွက် Android 9.0 ရေဒီယိုခေါင်းစဉ် - လာမည့်သီချင်းကိုကျော်။ အသံပမာဏကိုညှိပါသို့မဟုတ်အခြားချန်နယ်တစ်ခုကိုပြောင်းပါ။ W169 အတွက် Android radio head unit...
E-Class W211 G-Class w463 အတွက် Autoradio Android 9.0
E-Class W211 G-Class w463 အတွက် Autoradio Android 9.0 E-Class W211 အတွက် Autoradio Android 9.0 သည်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီး Android 9.0 operating system နှင့် octa-core CPU ပရိုဆက်ဆာများကထောက်ပံ့သည်၊ တပ်ဆင်ပြီးနောက်တက်ရန် ၁...
Vito Viano A-W169 အတွက် Android 9.0 Car Radio
Vito Viano A-W169 B-W245 အတွက် Klyde Android 9.0 ကားရေဒီယို ဒီ Android 9.0 Car Radio သည် A-W169 တွင်ထည့်သွင်းထားသော TDA7851L အသံချဲ့စက် IC, subwoofer audio output ကိုထောက်ပံ့ပြီးသီးခြားစီထိန်းချုပ်သည်။ အများဆုံးအသံ output ကို:4X ကို 50W, Android...
ကို C လူတန်းစားများအတွက်ဘလူးတုသ်ကားတစ်စီးစတီရီယို
ကို C လူတန်းစားများအတွက်ဘလူးတုသ်ကားတစ်စီးစတီရီယို 1.DVD ကစားသမား: DVD ကိုကစားသမား din ဒီတစ်ခုနှင့်အတူ, သငျသညျကို CD နှင့် DVD ကို discs တွေကိုဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။...
w211 များအတွက် dash ကားတစ်စီးကစားသမားအတွက်လူကြိုက်များ
w211 များအတွက် dash ကားတစ်စီးကစားသမားအတွက်လူကြိုက်များ 1.approval, 270 ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများနှင့်အစဉ်အမြဲ client ကိုရဲ့ requirements.we တွေ့ဆုံရန်ထုတ်ကုန်တိုးတက်အောင် & ဖွံ့ဖြိုးဆဲစောင့်ရှောက်သောအသက် 34...
2019 ခုနှစ်က S လူတန်းစားများအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးရေဒီယို
2019 ခုနှစ်က S လူတန်းစားများအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးရေဒီယို 1.Performance အဆိုပါမြင့်ဆုံးကို Rockchip ပရိုနှင့်အတူပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင် လျှော့ချတုံ့ပြန်မှုအချိန်။ ပိုမိုမြန်ဆန် app ကိုတင်။ Big ဒေတာသိုလှောင်မှု။...
W211 ဟာ android 9.0 ကားတစ်စီးအသံဖိုင်
W211 ဟာ android 9.0 ကားတစ်စီးအသံဖိုင် 1. W211 ဟာ android 9.0 ကားတစ်စီးအသံဖိုင်: ပံ့ပိုးမှုလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်: android စမတ်ဖုန်းနှင့် devices များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, အလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများနှင့်ကားကိုဦးခေါင်း...
dash ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာဟာ android 9.0 ကို C အတန်းထဲတွင်
dash ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာဟာ android 9.0 ကို C အတန်းထဲတွင် 1. ဘလူးတုသ် 4.0: လက်တို့ကိုအခမဲ့ခေါ်ဆိုမှု function ကိုအဘို့အ control panel ထဲက built-ခုနှစ်တွင်မိုက်ခရိုဖုန်း...
တရုတ်နိုင်ငံ -Benz က Android ကားကို DVD Player ကို ပေးသွင်း
ဒီကား DVD player ထောက်ခံမှုဂျီပီအက်စ်အညွှန်း, အကောင်းဆုံးရေဒီယို, မှန် link ကို function ကို, OBD, 3G WIFI, ဘလူးတုသ်, DAB, ဗီဒီယိုက MP3 ။
ဒီစီးရီးကွဲပြားခြားနားသော Benz ကားမထိုက်မတန် 8models, ရှိသည်။
အဘို့ဒီကား DVD GPS အရည်အသွေးမြင့်ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ 12 လအတွင်းအာမခံပေးခြင်း, CPU ကပိုပြီးအစွမ်းထက်နှင့်ပိုပြီးတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည်, Octa-core Rockchip PX5 Cortex A9 ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ scre en resolution ကို HD ကို 1024 * 600, ဒီကားကမာလ်တီမီဒီယာကစားသမားလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကောင်းစွာရောင်းချထားတဲ့ပူပြင်းတဲ့ရောင်းချခြင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
-Benz က Android ကား DVD -Benz က Android HD touch screen မော်တော်ကား DVD -Benz စမတ်သန့်စင်သောအန်းဒရွိုက်ကား DVD 7Inch ကို Android 4.0-Benz ကား DVD BMW က Android ကား DVD